How to add bokashi toaplanting container – bokashimyanmar.com
Empty and cleanaplanting container such asaterracotta pot, plastic plant pot or ceramic urn.
Cover the drainage hole with stones, terracotta pieces or coconut husk.
Addathick layer of your existing soil (sand, rice husk charcoal, or garden soil).
Addalayer of dry leaves if available.
A good basic mix is2parts soil,2parts dry leaves,4parts bokashi,2parts soil.
၁။မြေနီအိုး၊ပလပ်စတစ်ပန်းအိုး၊ကြွေပန်းအိုးစတဲ့ အပင်စိုက်တဲ့အိုးကို သွန်၍သန့်စင်အောင်ဆေြးေ ကာပါ။
၂။ရေထွက်ပေါက်လေးများကို အိုြး ခမ်းကွဲ ကျောက်စရစ်ခဲ သို့ အုန်းဆံခွံစသည်တစ်ခုခုခံ၍ပိတ်ပါ။
၄။ရှိလျင် ဖြစ်နိုင်လျင် သစ်ရွက်ခြောက်တစ်ထပ်ထည့်ပါ။
၅။ အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့ ဘိုကာရှီ တစ်ချို့တစ်ဝက် (သို)့ အကုန် သွန်ထည့်ပါ။
၆။ ဘိုကာရှိကို မြေဖုံးထည့်ပေး ပါ။ ရောမွှေပေးပါ။
ကောင်းမွန်သင့်လျော်တဲ့ ရောစပ်ပုံကတော့ မြေကြီး နှစ်ချိုး၊အရွက်ခြောက်နှစ်ချိုး၊ဘိုကာရှီလေးချိုး
ထည့်ပြီး မြေကြီးနှစ်ချိုးထပ်အုပ်ခြင်းပဲဖြ စ်ပါတယ်။
၁။သင့်စိုက်မြေဘောင်မှ အပေါ်ယံမြေကိုယက်ထုတ် တူးထုတ်ပါ။
၃။သင့်ဘိုကာရှီအချို့ သို့ အားလုံး ကို သွန်ထည့်ပါ။
၄။မြေကြီးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပြီး ဘိုကာရှိကို မြေကြီးနဲခပ်ပါးပါးရောသွားအောင်ရောမွှေပေးပါ။
၆။တစ်ပတ်စောင့်ပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်ပြါ ပီ။